कुलमान मुर्दाबाद | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home विविध कुलमान मुर्दाबाद
२०७७, २० पुष सोमबार १९:१८
देशमा फेरि लोडसेडिङको पुनर्आगम नभएको छ । जब देशमा अन्धकार छाउँछ अनि नेपालीलाई कुलमान घिसिङ याद आउँछ । मानौं कुलमान आफै करेन्ट हुन, हाईड्रोपावर हुन, लोडसेडिङको सात्क्षात मृत्यु हुन्, काल हुन् ।यादन आवस् पनिकिन? उनको कार्यकालमा लोडसेडिङ उन्मुलन गरेर सारा नेपालीको मन जिते ।
सायद विश्व कै यस्ता एक मात्र कर्मचारी हुन् जस्को पदावधि पुरा भएपछि पनि जनताले पुन र्नियुक्तिका लागि आवाज उठाए, फेसबुक रंगाए, आन्दोलन चर्काए । दवावमाथिदवावसिर्जना गरे । यस्तो घटना संसारमाविरलै होला ।कुलमानमा त्रकिन पछिल्लो समय नेपालमा केही व्यक्तिहरू व्यक्तिगत कामले चर्चित मात्र होईन धेरै नेपालीको मनमा बस्न सफल भएकाछन् ।
रवि लामिछाने लाई उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । टिभीमा सिधा कुरा जनतासँग कार्यक्रम चलाएर नेपालीका मन जितेका रवि प्रहरी प्रशासनबाट पक्राउ परेपछि जनता यसरी आन्दोलित भए कि उनी पत्रकार वा टिभी कार्यक्रम प्रस्तोता होईनन् राज नेताहुन् ।
धुर्मुस–सुन्तली –सिताराम कट्टेल–कुञ्जना घिमिरे)लाई अर्को उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । मेरी बास्सै टेलिसिलियर बाट हास्यब्यङ्ग क्षेत्रमा चर्चित यो जोडि बहत्तर बैशाख बाह्रको भुकम्प पछि हसाउन छोडेर भुकम्प पडितको आशु पुछ्न तिर लागे । पिडितलाई इकि मृत बस्ती निर्माण मार्फत पुनर्बास दिलाउन घर सम्पत्ति समेत बेचे ।
हाल यो जोडी सरकारले गर्न नसकेको जन सहयोग र सहभागिता मा बुद्द अन्तरास्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणमा व्यस्त छन् । कुलमान, रवि र धुर्मुस(सुन्तली त केही उदाहरण मात्र हुन् । यस्ता व्यक्तिहरूको चर्चा गरिरहदा महावीर पुनको नाम उल्लेख गरिएन भने अन्याय हुनेछ ।
म्यागेसेसे पुरस्कार विजेता डा. महावीर पुन सरकार बिना आविस्कार केन्द्र सञ्चालन गरि चर्चा कै शिखरमा छन् । वाक शक्तिका धनी रमेश प्रसाईं, स्पष्ट वक्ता ज्ञानेन्द्र शाहि लगायतका केही व्यक्तिहरु पनि यस्तै मार्ग पछ्याईरहेका जस्ता देखिन्छन् ।
माथि उल्लेखित व्यक्तिहरूको असल कामले होला धेरै नेपालीहरूले साथ र समर्थन गर्दै आईरहेका छन् । यहाँसम्म कि भावि प्रधानमन्त्री, भावि मन्त्री भन्दै फेसबुकका भित्ता रंगाउछन् । सम्मान र तारिफमा शब्द खर्चिन्छन् । यहाँसम्म कि सतहत्तर जिल्लाको जुनसुकै निर्वाचन क्षेत्रबाट अत्याधिक मतले विजयी हुने ठोकुवा गर्दछन् ।
आफु संलग्न क्षेत्रमा सफल हुनु र निर्वाचन लड्नु फरक कुरा हो भनी हरेक नेपालीले बुझ्न जरुरी छ । पार्टी प्रणालीको लोकतन्त्रमा व्यत्ति mगौण हुन्छ ।
अहिलेका नेतागण के युवा अवस्थामा चर्चित थिएनन् ? के जनताको नेपालीको मनमा बसेका थिएनन् ? जेलनेल भोगेका होईनन् ?आन्दोलन र युद्ध गरेका होईनन् ? तर अहिले हेर्नुस् त ! पटक पटक निर्वाचित भएर सत्ताको बागडोर सम्हाल्दा पनि किन आफ्नो आश्वासन पूरा गर्न सकेका छैनन् ?किन जनता माझ न झन वितृष्णा थपिरहेका ेछ ?
त्यसैले कुलमान, रवि, महावीर अनिधुर्मुस–सुन्तलीले जुन काम गरिरहेका छन् त्यहि काममा रमाउन दिनुस् । रमेश पोखरेल र ज्ञानेन्द्र शाहिलाई मज्जाले बोल्न प्रोत्साह नगर्नुस् । उनीहरुबाट देशले त्यही क्षेत्रमा थप योगदानको अपेक्षा गरेको छ ।
उनीहरूलाई जवर्जस्ति राजनीति जस्तो फोहोरी खेलमा नघसार्नु होला । यस्तो गल्ती भयो भने यी नायकहरू खलनायकमा परिणत हुनेछन् ।चुनाव जित्न मतपत्र च्यातिनेछ, बुथ क्याप्चर गरिनेछ ।मत गणना स्थगित गरिनेछ । पासपोर्ट काट्ने युवाको लाईन हुनेछ ।
विदेशीने युवाले पसिनाचुहाउनेछन् भने स्वदेशमा बस्ने युवाले रगत ।बाहिर “सुखीनेपाल–सम्बृद्ध नेपाल”को नारा घोकाएर आफ ुभने उखानटुक्का कण्ठ गर्नमा व्यस्त रहनेछन् ।घाँटी जोडिएका नेताहरुलाई सत्तोसराप गर्नु पर्नेछ ।
सत्ता र भत्ताको खेलमा सांसद खरिद बिक्री हुनेछ । गुट र उपगुटको दलदलमा फस्न ेछन् । काण्डैकाण्ड र सम्झौताको चाँग लाग्ने छ ।निर्मलाको न्यायको लागि बोल्ने बोल्ती बन्द हुनेछ । आफ्नो पसिनाको मोल माग्ने उखु किसानहरुलाई दलाल भन्नु पर्नेछ । “र” का एजेण्ट कहलिन ेछन् । भष्ट्रचारको कालो दाग लाग्नेछ । नाताबाद र कृपाबादमा लिप्त हुन ेछन् । विदेशी दलाल बन्नेछन् ।
भागबण्डाको लागि स्वाभिमान बेचेछन् । भोट पाउन चुच्चे नक्सा देखाउन ेछन् । स्वास्र्थ पुरा गर्न जनताको रगत पसनिाले निर्माण भएको संविधान कल्चने छन् । ईतिहासमा कलङ्कित बन्नेछन् । नेपालीको मनबाट यीनिहरूको तस्बिर सदाको लागि मेटिनेछ । प्रतिगामी तत्वले, देशीविदेशी शक्तिले फेरि घृणाको पात्रमा परिणत गर्नेछन् ।र यो पुस्ताले जयजयकार गरेका यी व्यक्तिहरूलाई अर्को पुस्ताले सडकमा आई यस्ता नारा लगाउन बाध्यहुने छन्–“कुलमान मुर्दाबाद ।“
Previous articleम्याग्दीमा केपी ओलीको समुह ‘देखाउने दाँत मात्र’ :नेकपा अध्यक्ष पौडेल
Next articleदाहाल-नेपाल समूहले गुरुङलाई गण्डकी प्रदेश इन्चार्जबाट हटायो
लेखक प्रकाश माविका शिक्षक हुन् ।
बढ्दो दुर्घटना रोकौं